लेख्न सुरु गर्नुभन्दा पहिले के गर्ने | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
Home अन्तवार्ता लेख्न सुरु गर्नुभन्दा पहिले के गर्ने
लेख्न सुरु गर्नुभन्दा पहिले के गर्ने
पढेर वा थाहा पाएर कोही लेखक हुने होइन, तर पनि केही कुरा छन् जसमा विचार गरे लेखनमा केही सहायता पक्कै हुन्छ । लेख्न सजिलो छ, धेरै सजिलो तर अरूको मुटु पगाल्ने गरी लेख्न भने धेरै गाह्रो छ । केही हदसम्म लेखन गड गिफ्ट पनि हो, तर मेहनत गर्दा केही कुरा बन्छ पनि । आत्मसन्तुष्टिका लागि लेख्ने हो भने केही छैन, तर आफूले लेखेको कुरा धेरैभन्दा धेरै पाठकले पढून् भन्ने लाग्छ भने धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
– सबैभन्दा पहिले हामीले यो थाहा पाउनुपर्‍यो, कसका लागि लेख्ने ? यो कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यो समूह, जात वा लिङ्गका व्यक्ति के चाहन्छन्, निक्र्यौल गर्ने । यसका लागि आवश्यक रिसर्च पनि गर्न सकिन्छ ।
– आफूले लेख्ने कथाले पहिले आफ्नो मगज हल्लाउनुपर्छ । आफैँलाई मन नपरेको विषयमा जबरजस्ती हात हाल्नु हुँदैन ।
– आफूले लेखेको कुराबाट सबैभन्दा पहिले आफैँले इन्जोय गर्नुपर्छ । आफैँ इन्जोय नभएको कुरामा अरु इन्जोय हुन्छन् भन्ने सोच्नु भ्रम हो । सक्दो इन्जोय गरेर लेखौँ । प्रेसरमा लेख्नु हुँदैन, लेखाइ बिग्रन्छ ।
– लेख्न सुरु गर्नुभन्दा पहिले कथाको स्केलेटन बनाउने । कुन च्याप्टरमा के लेख्ने ? कति शब्द खर्चिने मोटामोटी प्लान आवश्यक हुन्छ ।
– के लेख्दै छु ? त्यससँगसम्बन्धित आवश्यक पुस्तकहरू पढ्ने । आवश्यक ठाउँहरूको भ्रमण गर्ने ।
– पुस्तक धेरै अध्ययन गरेर मात्र लेख्न आउँछ भन्ने पनि होइन । अध्ययन धेरै थोकको गर्न सकिन्छ । सही मान्छेको संगतले पनि धेरै कुरा सिकाउँछ । सयौँ पुस्तकबाट नपाएको ज्ञान एउटा राम्रो मान्छेको संगतबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
– आफूले लेख्न खोजेको कुरालाई लम्बे–चौडेभन्दा पनि छोटो र मीठो भाषामा भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । अधिकांश मानिसलाई सरल लेखनी नै मन पर्छ ।
– जे लेखे पनि भरसक कसैले हात नहालेको विषयमा लेख्ने प्रयास गर्ने । अरूले बनाएको बाटोमा हिँड्नुभन्दा आफैँले बनाएर हिँडेको बाटोमा आनन्द पनि मिल्छ र प्रशंसा पनि ।
– नयाँ र आधुनिक विम्बहरू छनौट गर्ने । घामजस्तै न्यानो, पानीबिनाको माछा जस्तो, हिँउजस्तै चिसो…….आदि र यस्ता खालका बिम्बको प्रयोगले लेखन खल्लो बनाउँछ । नयाँ विम्बको आवश्यकता छ ।
-हरेक कुरालाई सूक्ष्म दृष्टिकोणले हेर्ने । एउटा सफल र राम्रो लेखकले त्यो चीज देख्छ, जुन
साधारण मान्छेले कत्ति गरे पनि देख्न सक्दैन । मानिसहरू कसरी बोल्छन् ? कस्तो पहिरन कसरी लगाएका छन् ? वरपरको वातावरण कस्तो छ ? मौसम कस्तो छ ? यी सबै चीजको गहिरो अध्ययन गरी बुझ्न र स्मरण गर्न सक्नुपर्छ ।
– लेखनमा सक्दो पन्च लाइन हाल्ने । मानिसहरूलाई मनमा च्वाट्टै बस्ने लाइन लेखियो भने त्यो फेसबुक, ट्वीटरमा सेयर भएर भाइरल हुन्छ र नि:शुल्क विज्ञापन हुन सक्छ । गाह्रो हुन्छ लेख्न, तर यस्ता पञ्च लाइन पुस्तकमा जति सक्दो भएको राम्रो ।
– कथा वा उपन्यास लेख्दा सुरुमै रुचिपूर्ण घटना वा संवाद हाल्ने । यसले पढ्नेको मन झ्वाम्म तानिहाल्छ । लम्बेचौडे लेख्न थालियो भने पहिलो पेजबाटै पाठक बोर हुन थाल्छ र तीन चार पन्ना पढेर पुस्तक थन्क्याइदिन्छ ।
– सक्दो घुम्नुपर्छ । यसले नयाँ घटना फेला पार्न, पात्र चयन गर्न तथा नयाँ अनुभव प्रदान गर्न सक्दो सहयोग गर्छ ।
– मानिसहरू भन्छन्– ‘यसो फुर्सदमा लेख्छु ।’ समय आफैँ कहिल्यै निस्कँदैन, निकाल्नुपर्छ ।